Cookie-Richtlinie (EU) | Option UK
Ity fanambarana cookie ity dia nohavaozina farany tamin'ny 2. Aprily 2020 ary mihatra amin'ny olom-pirenena amin'ny faritra ara-toekarena eropeana.
Ny tranokalanay, https://united-kingdom.option.news (manaraka izao: "ny tranokala") dia mampiasa mofomamy sy teknolojia hafa mifandraika (ho fanamorana ny teknolojia rehetra dia antsoina hoe "cookies"). Ny mofomamy dia apetraky ny antoko fahatelo izay efa raisinay. Ao amin'ny antontan-taratasy eto ambany dia mampahafantatra anao momba ny fampiasana cookies izahay amin'ny tranokalanay.
2. Inona no mofomamy?
Cookie iray dia rakitra tsotra kely izay alefa miaraka amin'ireo pejin'ny tranonkala ity ary tehirizin'ny browser-nao any amin'ny rantsan-tanan'ny solosaina na ny fitaovana hafa. Ny fampahalalana voatahiry ao dia mety averina any amin'ireo mpizara antsika na amin'ireo mpizara avy amin'ireo antoko fahatelo mifandraika mandritra ny fitsidihana aorian'izay.
3. Inona avy ny script?
Ny script iray dia sombin-kaody fandaharana izay ampiasaina amin'ny fampandehanana ny tranokalanay tsara sy amin'ny fifandraisana. Ity fehezan-dalàna ity dia tanterahana amin'ny mpizara anao na amin'ny fitaovanao.
4. Inona ny hoe beacon web?
Ny beacon web (na marika piksel) dia sombin-tsoratra na sary kely tsy hita maso amin'ny tranokala iray ampiasaina hanaramaso ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala iray. Mba hanaovana izany dia voatahiry mampiasa zana-tsipika web samihafa ireo angona samihafa momba anao.
Rehefa mitsidika ny tranokalanay sambany ianao, dia hasehontsika anao ny fandraisana an-tranonao misy fanazavana momba ny cookies. Vantany vao tsindrio ny «All Cookies» dia manaiky ianao hampiasa ny mofomamy sy ny plug-in rehetra araka ny voalazan'ny pop-up sy ity fanambarana cookie ity. Azonao atao ny manalefaka ny fampiasana cookies amin'ny alàlan'ny browser, saingy tsarovy azafady fa mety tsy mandeha tsara intsony ny tranokalanay.
5.1 Mitantana ny fahazoan-dàlanao
6.1 cookies na teknika miasa
Ny cookies sasany dia miantoka fa ny ampahany sasany amin'ny tranokala dia miasa tsara ary ny fahafahan'ny mpampiasa anao fantatra. Amin'ny alàlan'ny fametahana mofomamy ilaina, dia manamora ny fitsidihanay ny tranokalanay. Amin'izany fomba izany, dia tsy mila miditra matetika ny fampahalalana mitovy ihany ianao rehefa mitsidika ny tranokalanay ary, ohatra, dia mijanona ao anaty carte de baranao ny entana mandra-pandoanao. Azontsika atao ny mametraka ireo cookies ireo raha tsy ekenao.
6.2 cookies mofomamy
Mampiasa mofomamy an-tsehatra izahay mba hametrahana ireo traikefa amin'ny tranokala ho an'ny mpampiasa. Amin'ireo cookies mofomamy ireto dia mahazo vina tsara amin'ny fampiasana ny tranokalanay izahay. Mangataka ny fahazoan-dàlana anao hametraka mofomamy mpandinika izahay.
6.3 cookies cookies
Eto amin'ity tranokala ity dia mampiasa cookies cookies, ahafahantsika mahazo vahana amin'ny valin'ny fampielezan-kevitra. Ity dia miorina amin'ny mombamomba iray noforoninay mifanaraka amin'ny fihetsikao https://united-kingdom.option.news. Miaraka amin'ireto cookies ireto dia mifamatotra amina ID tokana ny mpitsidika tranokala, nefa tsy hanome ny toetranao sy ny tombotsoanao hampiasana doka manokana.
Satria ireo mofomamy ireo dia voamariky ny fanandramana cookies, dia asainay ny fahazoan-dàlana anao hametraka ireto.
Bokotra media 6.4 Social
Tao amin'ny tranokalanay dia nampiditra bokotra ho an'ny Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Disqus ary Pinterest hampiroboroboana tranonkala (ohatra "toy", "pin") na mizara (oh. "Bitsika") ao amin'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Disqus ary Pinterest. Ireo bokotra ireo dia mandeha amin'ny alàlan'ny kaody hita avy amin'ny Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Disqus ary Pinterest ny tenany. Ity kaody ity dia mametraka cookies. Ireo bokotra haino aman-jery sosialy ireo dia afaka mitahiry sy mizara fampahalalana sasany, koa azo aseho aminao ny dokambarotra manokana.
Azafady vakio ny fanambarana momba ny tsiambaratelo amin'ireto tambajotra sosialy ireto (izay afaka miova tsy tapaka) mba hamakiana ny zavatra ataon'izy ireo amin'ny angon-drakinao (manokana) izay ataon'izy ireo mampiasa ireo cookies. Ny angon-drakitra naloa dia tsy fantatra anarana betsaka araka izay azo atao. Any Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Disqus ary Pinterest no misy ao Etazonia.
7. Mofomamy napetraka
Mampiasa ny antontan'isa momba ny tranokala Google izahay.
anarana fihazonana asa
Statistika (tsy fantatra anarana)
_ga 2 taona
_gid 1 andro Manisa sy mijery ny fijerin'ny pejy
_gat 1 minitra Sivana ny fangatahana amin'ny bots
_gat_gtag_UA_ * 1 minitra Asio marika mpampiasa tokana
_gat_UA- * fivoriana
Tanjona miandry ny fanadihadiana
_ga_ * 2 taona
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Fitsipika momba ny tsiambaratelo Google Analytics.
Mampiasa Intercom Messenger izahay ho fanohanana resaka.
session intercom * Herinandro 1
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Intercom Messenger Policy.
Fandraiketana Google Analytics ho an'ny WP
Mampiasa ny Dashboard Google Analytics ho an'ny WP ho an'ny antontan'isa tranokala izahay.
gadwp_wg_default_swmetric 1 taona Manisa sy mijery ny fijerin'ny pejy
gadwp_wg_default_metric 1 taona Manisa sy mijery ny fijerin'ny pejy
gadwp_wg_default_dimension 1 taona Manisa sy mijery ny fijerin'ny pejy
Tsy zahana amin'ireo antoko fahatelo ny angon-drakitra.
Mampiasa ny antontan'isa an'ny Yandex Metrica izahay.
_ym_uid 2 taona
_ym_d 1 taona
_ym_isad 1 andro
Mampiasa ny automattic ho an'ny fampandrosoana ny tranonkala izahay.
tk_ai fivoriana Asio marika mpampiasa tokana
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Automattic policy policy.
Izahay dia mampiasa Complianz amin'ny fitantanana ny fanekena cookie.
cmplz_id 365 andro Mitahiry antontan'isa tsy mitonona anarana
cmplz_choice 365 andro Mitahiry raha nisy hafatra natsipy
complianz_consent_status 365 andro Mitahiry ny safidy fahazoan-dàlana cookie
complianz_policy_id 365 andro ID eken'ny cookie momba ny cookie
cmplz_user_data 365 andro Hamarino izay sary asongadin'ny cookie
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politikan'ny tsiambaratelo Complianz.
Mampiasa statistika ho an'ny statistika tranokala izahay.
is_unique 5 taona Mitahiry fitsidihana tsy manam-paharoa
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika momba ny tsiambaratelo.
Mampiasa ny WooCommerce ho an'ny fitantanana tranonkala izahay.
wp_woocommerce_session_ * fivoriana Manatontosa hetsika amin'ny tranokala
woocommerce_items_in_cart fivoriana Manangona ireo entana ao anaty carte miantsena
woocommerce_cart_hash 1 andro Manangona ireo entana ao anaty carte miantsena
Lahatsoratra hita amin'ny kaonty
Mampiasa ny kaonty Lahatsoratra View ho an'ny statistika tranokala izahay.
Mampiasa an'i Wistia izahay ho fampisehoana horonantsary.
Marketing / fanenjehana
wistia maharitra Manatontosa hetsika amin'ny tranokala
wistia-video-fandroso- * maharitra
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika momba ny fiainana manokana ao Wistia.
Mampiasa ny Google Translate ho an'ny fitantanana eo an-toerana izahay.
googtrans fivoriana Mitahiry ny filaharana amin'ny fiteny
Mampiasa ny Google Fonts ho an'ny endri-tsoratra na endri-tranonkala izahay.
Google Fonts API tsy misy Mangataka ny adiresy IP mpampiasa
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Google Politika momba ny tsiambaratelo.
Mampiasa ny Vimeo izahay ho fampisehoana horonantsary.
__utmt_player 10 minitra Mitahiry mpanatrika sy alàlan'ny mpanatrika
vuid 2 taona Tehirizo ny tantaran'ny fampiasana ny mpampiasa
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika momba ny tsiambaratelo Vimeo.
Mampiasa YouTube amin'ny fandaharana horonantsary izahay.
GPS fivoriana Mitahiry ny angon-drakitra momba ny toerana
VISITOR_INFO1_LIVE 6 volana Tombanana ny bandwidth
YSC fivoriana Asio marika mpampiasa tokana
PREF 1 taona Mitahiry sy mitsangatsangana fitsidihana ireo tranokala rehetra
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika momba ny fiainana manokan'ny YouTube.
Mampiasa Facebook izahay hiseho na lahatsoratra sosialy sy / na bokotra fizarana sosialy.
actppresence 1 taona Mitantana fehitsela fampisehoana doka
fbm * 1 taona Mitahiry antsipirihany kaonty
_fbc 2 taona Tsidiho ny fitsidihana farany
xs 3 volana Mitahiry ny ID misy fivoriana tsy manam-paharoa
fr 3 volana Mampifamadiho ny serivisy adiresy na retargeting
_fbp 3 volana Mitahiry sy mitsangatsangana fitsidihana ireo tranokala rehetra
datr 2 taona Manome fisorohana hosoka
sb 2 taona Mitahiry antsipirihany an-tserasera
* _fbm_ 1 taona Mitahiry antsipirihany kaonty
wd Herinandro 1 Fantaro ny fanitsiana ny efijery
fihetsika 90 andro Tazomy ny mpampiasa niditra
c_user 90 andro Asio marika mpampiasa tokana
csm 90 andro Manome fisorohana hosoka
anatrehan'ny fivoriana Mitahiry sy manara-maso raha mazoto ny tabin'ny navigateur
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Facebook Politika momba ny fiainana manokana.
Mampiasa ny Twitter izahay hiseho na lahatsoratra vao haingana sy / na bokotra fizarana sosialy.
local_storage_support_test maharitra Fampandanjana entana mandanjalanja
metrics_token maharitra Mitahiry raha nahita ny votoaty misy ny mpampiasa
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika momba ny fiainana amin'ny Twitter.
Izahay mampiasa AMP ho an'ny fanatsarana ny fampisehoana tranonkala.
AMP_TOKEN maharitra Asio marika mpampiasa tokana
Mampiasa ny Google Tag Manager ho an'ny antontan'isa tranokala izahay.
uslk_e 1 taona
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika momba ny tsiambaratelo Google Tag Manager.
Mampiasa ny Google Maps ho an'ny fisehoana sarintany isika.
Google Maps API tsy misy Mangataka ny adiresy IP mpampiasa
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika manokan'ny Google Maps.
Mampiasa LinkedIn izahay amin'ny fisehoana na lahatsoratra sosialy sy / na bokotra fizarana sosialy.
bcookie 2 taona Mitahiry antsipirihany an-tserasera
li-oatml 1 volana Mampifamadiho ny serivisy adiresy na retargeting
li_sugr 3 volana Mitahiry antsipirihany an-tserasera
User Match History 30 andro Mampifamadiho ny serivisy adiresy na retargeting
LIDC 1 andro Manatontosa hetsika amin'ny tranokala
bscookie 2 taona Manatontosa hetsika amin'ny tranokala
X-li-IDC fivoriana Manome fiasa manerana ny pejy
BizographicsOptOut 10 taona Mitahiry ny safidy manokana
linkedin_oauth_ * fivoriana
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika momba ny fiainana manokana an'ny LinkedIn.
Mampiasa ny doka Google izahay.
dokam-barotra / Ga-mpihaino tsy misy Mitahiry fampahalalana ho an'ny tanjona famerenana
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika manokan'ny Google Ads.
Mampiasa ny WordFence ho an'ny fiarovana ny tranokala izahay.
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny Politika momba ny tsiambaratelo WordFence.
8. ny zonao momba ny angon-drakitra manokana
Manana ny zonao manaraka ianao momba ny angon-drakinao manokana:
Mba hampihatra ireo zo ireo dia mifandraisa aminay. Azafady zahao ny antsipiriany momba ny fifandraisana amin'ny faran'ny fanambarana cookie. Raha manana fitarainana momba ny fomba hitondranay ireo angon-drakinao ianao dia te handre avy aminao, saingy manana ny zonao hametraka fitarainana amin'ny fahefana mpanara-maso ihany koa ianao (ny Data Protection Authority).
9. Fampandehanana / manafoana sy mamafa ny cookies
Azonao atao ny mampiasa ny Internet navigateur mba hanaisotra ireo cookies matetika. Azonao atao koa ny mamaritra fa ny mofomamy sasany dia tsy apetraka. Safidy hafa dia ny fanovana ny fisie eo amin'ny Internet, mba hahazoanao hafatra isaky ny napetraka mofomamy. Raha mila fanazavana fanampiny momba ireo safidy ireo dia azafady zahao ny torolàlana ao amin'ny fizarana fanampiana ao amin'ny navigateur.
Azafady, azafady fa mety tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny tranokalanay raha tsy mandeha ny cookies rehetra. Raha esorinao ny cookies ao amin'ny browser, dia hapetraka indray aorian'ny fanekenao rehefa mitsidika ny tranokalanay indray.
10. Ny antsipiriany momba ny fifandraisana
Ho an'ny fanontaniana sy / na fanehoan-kevitra momba ny politika cookie sy ity fanambarana ity, azafady mba mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny antsipirian'ny fifandraisana eto:
Ity politika politika ity dia nifanaraka tamin'izany cookiedatabase.org tamin'ny 1 Jolay 2020